संक्रमित जीवन को जीस, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
आज म तपाईंलाई फिलिप्पीन चर्चलाई दिएको सल्लाह पालन गर्न प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। उसले उनलाई केहि गर्न आग्रह गर्यो र मँ तपाईलाई यसको बारेमा के देखाउँछु र उही त्यस्तै गर्ने निर्णय गर्न तपाईलाई सोध्छु।
येशू पूर्ण रूपमा परमेश्वर र पूर्ण मानव हुनुहुन्थ्यो। फिलिपीन्समा यसको ईश्वरीयताको क्षतिको कुरा गर्ने अर्को खण्ड पाउन सकिन्छ।
"किनकि यो भावना तिमीहरुमा छ, जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो, जो परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसलाई परमेश्वरको जस्तो हुनलाई लुट्ने कुरो थिएन। तर उनले आफैंले भने, एक नोकरको रूप लिए र मानिस जस्तै नै भयो, र आफ्नो बाहिरी उपस्थिति मा एक मानिस जस्तै आविष्कार, उसले आफूलाई नम्र तुल्यायो र क्रूसमा मृत्यु सम्म, आज्ञाकारी भयो। त्यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई सबै मानिसहरुभन्दा माथि उचाल्नुभयो र उहाँलाई एउटा नाम दिनुभयो जुन सबै नाम भन्दा माथि छ, ताकि येशूका नाममा स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएका सबै घुँडा टेकेका छन् र पृथ्वीको मुनि सबै भाषाहरू स्वीकार गर्छन् येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वरको महिमाको निम्ति, (फिलिप्पीहरू २,2,5-११)।
म यी पदहरूमा आधारित दुई चीजहरू राख्न चाहन्छु:
१. येशूको स्वभावको बारेमा पावलले के भन्छन्?
२ किन उसले त्यो भन्छ।
उनले येशूको स्वभावको बारेमा किन केही भने भनी निश्चय गरेपछि हामीसँग आउने वर्षको लागि निर्णय छ। यद्यपि, कसैले सजिलैसँग पद 6--7 को अर्थ बुझ्न सक्दछ कि येशूले आफ्नो ईश्वरत्व पूर्ण वा आंशिक रूपमा त्याग्नुभएको थियो। तर पावलले त्यसो भनेनन। आउनुहोस्, हामी यी पदहरूको विश्लेषण गरौं र हेरौं उसले के भन्छ।
ऊ भगवानको आकारमा थियो
प्रश्न: उसले परमेश्वरको व्यक्तित्वले केलाई बुझाउँदछ?
पद 6--7 केवल NT मा मात्र पदहरू हुन् जसमा ग्रीक शब्द पॉल समावेश गरिएको छ
"गेस्टल्ट" प्रयोग भएको छ, तर ग्रीक एटीले शब्द चार पटक समावेश गर्दछ।
न्यायकर्ताहरु 8,18 तब गिदोनले जेबह र सल्मुन्नालाई भने, “तबोरमा तिमीलाई मार्नु भन्यौ। उनीहरूले भनेः तिनीहरू तिमी जस्तो थिए, शाही बच्चाहरू जत्तिकै सुन्दर। »
काम :4,16:१ "" उहाँ त्यहाँ उभिनुभयो र मैले उनको उपस्थिति चिन्न सकेन, मेरो आँखाको अगाडि एउटा आकृति थियो, मैले एउटा कानाफूँको आवाज सुनें: "
यशैया :44,13:१ car कारभरले दिशानिर्देश फ्याँक्छ, उसले यसलाई कलमले कोर्यो, नक्काशी चक्कुको साथ काम गर्दछ र कम्पासको साथ यसलाई बाहिर निकाल्दछ; र उसले यो मानिसलाई जस्तो देखिने बनाउँछ, मानौं उसको घरको सुन्दरता झैं।
दानियल 3,19 "नबूकदनेस्सर क्रोधित भए र उनको अनुहारको रूप सद्रक, मेसाक र अबेद्नगोको बिरूद्ध बदले। उनले स्टोभलाई सात पटक तातो बनाउने आदेश दिए।
पावलको अर्थ हो [शब्दको आकारको साथ] त्यसैले ख्रीष्टको महिमा र महिमा। उहाँसँग महिमा, महिमा र ईश्वरीयताका सबै चिन्हहरू थिए।
भगवान बराबर हुनु
समानताको उत्तम तुलनात्मक प्रयोग जोहान्समा पाउन सकिन्छ। यूहन्ना .5,18.१XNUMX "यसकारण यहूदीहरूले उनलाई मार्न अझ अधिक प्रयास गरे किनभने उसले विश्राम दिन भbath्ग गरेन तर परमेश्वरलाई आफ्नै पिता पनि भने। यसैले उनले आफूलाई परमेश्वर बराबर तुल्याए।"
यसैले पावलले एक ख्रीष्टको बारेमा सोचे जो वास्तवमा परमेश्वर बराबर थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, पावलले भने कि येशूसँग परमेश्वरको पूर्ण महिमा थियो र उहाँ वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। मानव स्तरमा, यो भन्नुको बराबर हुनेछ कि कोही शाही परिवारको सदस्यको रूपमा देखा पर्दछ र वास्तवमा शाही परिवारको सदस्य थियो।
हामी सबैलाई चिन्छौं जसले शाही परिवारको सदस्यको रूपमा व्यवहार गर्छ, तर त्यो होईन, र हामीले शाही परिवारका केही सदस्यहरूको बारेमा पढ्यौं जसले शाही परिवारको सदस्य जस्तो व्यवहार गर्दैनन्। येशूसँग "उपस्थिति" र ईश्वरीय स्वभाव दुवै थियो।
एक डकैती जस्तै पकड
अर्को शब्दहरु मा, केहि तपाइँ तपाइँको आफ्नो लाभ को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधाजनक व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो स्थिति व्यक्तिगत लाभहरूको लागि प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ। तपाईंलाई प्राथमिक उपचार दिइनेछ। पावल भन्छन् कि येशू सृष्टिकर्ता र सारमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उनले यस तथ्यलाई मानवको रूपमा लिनु भएन। पद 7-8 ले देखाउँदछ कि उसको मनोवृत्ति diametrically विपरीत थियो।
येशू आफूलाई अलग गर्नुभयो
उसले के भने? जवाफ छ: केहि छैन। उहाँ पूर्ण रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। भगवान केहि समयको लागि पनि परमेश्वर हुन रोक्न सक्दैन। उनले आफूसँग भएका कुनै पनि ईश्वरीय गुण वा शक्तिलाई त्यागेनन। उनले चमत्कारहरू गरे। उसले दिमाग पढ्न सक्छ। उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्‍यो। र रूप परिवर्तनमा उनले आफ्नो महिमा देखाए।
पावलले यहाँ भन्न खोजेको कुरा अर्को पदबाट देख्न सकिन्छ जसमा उनले "उच्चारण" को लागी उही शब्द प्रयोग गरेको छ।
१ कोरि। .1 .१9,15 «तर मैले यसको कुनै उपयोग गरेको छैन; मैले यो लेख्नु भएन। कसैले मेरो प्रतिष्ठा बिगारेको भन्दा म मर्न चाहन्छु! »
"उनले आफ्ना सबै सुविधाहरू छोडे" (GN1997-Übers।), «उसले आफ्नो सुअवसरहरूमा जोड दिएन। होइन, उसले माफ गर्यो » (सबै अनुवादकहरूको लागि आशा।) मानवको रूपमा, येशूले न त आफ्नो ईश्वरीय प्रकृति प्रयोग गर्नुभयो न त आफ्नै ईश्वरीय शक्तिहरू आफ्नै फाइदाको लागि। उनले यसलाई सुसमाचारको प्रचार गर्न, चेलाहरूलाई शिक्षा दिन आदि प्रयोग गरे - तर आफ्नो जीवनलाई सजिलो बनाउन कहिल्यै भनेनन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उसले आफ्नो फाइदाको लागि आफ्नै शक्ति प्रयोग गरिरहेको थिएन।
मरुभूमिमा गाह्रो परीक्षा।
जब उसले मित्रैला शहरहरू नष्ट गर्न आकाशबाट आगो बोलाएन।
क्रूसमा टाउको (उनले भने कि उनले आफ्नो रक्षाको लागि स्वर्गदूतहरूको फौज बोलाउन सक्थे।)
हाम्रो मानवतामा पूर्ण रूपले भाग लिने ईश्वरको रूपमा पाएको सबै फाइदाहरू स्वेच्छाले त्यागे। फेरि पद 5--8 पढौं र अब यो कुरा कति स्पष्ट छ हेर्नुहोस्।
फिलिप। २,2,5-8 «किनकि यो मनोवृत्ति तपाईंमा छ, जुन ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो, who जो परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लुटपाटको रूपमा परमेश्वरजस्तो हुनुहुन्न; But तर उनले आफूलाई बोले, एक नोकरको रूप लिए र मानिस जस्तै देखाए, र एक मानिस जस्तै आफ्नो बाहिरी उपस्थिति मा, he उसले आफूलाई नम्र तुल्यायो र मृत्युसम्मै आज्ञाकारी भयो, क्रूसमा मृत्युसम्म। "
त्यसोभए, पावलले ख्रीष्टलाई सबै मानिसभन्दा माथि उठाए भन्ने टिप्पणीसँग टु conc्गिन्छ। फिलिप। २.2,9
Is त्यसकारण परमेश्वरले उनलाई सबै मानिसहरुभन्दा उच्च पार्नुभयो र उसलाई एउटा नाम दिनुभयो जुन सबै नामहरु भन्दा माथि छ। यसैले स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि भएका येशूको घुँडा टेक्नेहरू र सबै भाषाहरूले परमेश्वर पिताको महिमाका निम्ति येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छन्।
त्यसो भए त्यहाँ तीन चरणहरू छन्:
भगवानको रूपमा ख्रीष्टको अधिकार र सुविधाहरू।
उहाँको छनौट यी अधिकारहरु प्रयोग गर्न को लागी, बरु एक नोकर हुन।
यस जीवनशैलीको परिणाम स्वरूप यसको अन्तिम उचाइ।
विशेषाधिकार - सेवा गर्न तत्परता - वृद्धि
अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि यी पदहरू फिलिप्पीमा किन छन्। सर्वप्रथम हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि फिलिप्पीहरू पत्र हो जुन खास चर्चलाई विशेष समयमा लेखिएको थियो। त्यसकारण, पावलले २: -2,5-११ मा के भनेका थिए त्यो पूरै पत्रको उद्देश्यसँग केहि हुनुपर्दछ।
सर्वप्रथम हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि जब पावलले फिलिप्पीमा पहिलो पटक भ्रमण गरे र त्यहाँको चर्च सुरू गरे, पावल पक्राऊ परे (प्रेरित:: २०-२१) यद्यपि चर्चसँग उसको सम्बन्ध सुरुदेखि नै न्यानो रहेको थियो। फिलिप्पी १: –-– "जहिले पनि म तपाईको बारेमा सोच्छु म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, always सधैँ खुशीसाथ अन्तस्करण राखेर, तपाईहरु सबैका निम्ति मेरो प्रार्थनामा, day पहिलो दिनदेखि अहिले सम्म सुसमाचारमा तपाईको सहभागिताको लागि।"
उनले यो पत्र रोमको जेलबाट लेखेका थिए। फिलिप्पी १: ““ यो तपाईको सबैको बिचारमा मात्र सही छ किनकि म तपाईलाई मेरो हृदयमा बोक्दछु, जुन तिमीहरु सबैलाई मेरो बन्धनमा अनुग्रहमा बाँडिछौ र मसँग सुसमाचारको बचाव र पुष्टि गर्नमा। »
तर ऊ निराश वा निराश छैन, बरु खुशी हो।
फिलि। २,१-2,17-१-18 «तर यदि तपाईंको बलिदान र तपाईंको विश्वासको पुजारीको सेवाको लागि मलाई कुनै पेय पदार्थ खन्याइयो भने म तपाईंहरू सबैसित खुसी र खुसी छु! १ the त्यस्तै प्रकारले तपाई पनि खुशी हुनुपर्दछ र मसँग रमाउनुहोस्!
उनले यो पत्र लेख्दा पनि उनीहरूले निकै उत्सुकतासाथ समर्थन गरिरहे। फिलिप। ,,१-4,15-१-18 «र तपाई फिलिप्पीहरूलाई पनि थाहा छ कि सुसमाचारको सुरूमा, जब म म्यासिडोनिया छोडेर गएँ, कुनै पनि चर्चले मसँग तपाईंसँग भन्दा बढी आम्दानी र खर्चको हिसाबमा भाग लिएन; १ Yes हो, तपाईंले मलाई एक पटक र दुई पटक थिस्सलोनिकामा मेरो आवश्यकताहरू पूरा गर्न पठाउनुभयो। १ Not यो होइन कि म उपहारको लागि सोध्छु तर फल तपाईको खातामा प्रशस्त मात्रामा पाउन चाहान्छु। १ I मसँग सबै कुरा र प्रशस्तता छ; मैले इपाफ्रोडाइटसलाई ग्रहण गरेको समयदेखि नै मेरो ख्याल आएको छ।
चिठीको स्वरले घनिष्ट सम्बन्ध, प्रेमको कडा इसाई समुदाय, र सेवाको लागि तयार हुने र सुसमाचारको लागि कष्ट भोग्ने सल्लाह दिन्छ। तर त्यहाँ पनि संकेतहरू छन् कि सबै जस्तो हुनु पर्दैन।
फिलिप्पी १,२1,27 केवल तपाईको जीवनलाई ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि योग्य बनाउनुहोस्, ताकि जब म आउँछु वा देखाउँछु वा अनुपस्थित हुँ, तपाईंबाट सुन्न सकिन्छ कि तपाईं एक आत्मामा दृढ हुनुहुन्छ र एकमत भएर सुसमाचारको विश्वासको लागि संघर्ष गर्नुहुन्छ। । »
"तपाईंको जीवन नेतृत्व गर्नुहोस्" - ग्रीक। Politeuesthe भनेको समुदायको नागरिकको रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु हो।
पावल चिन्तित थिए किनकि उनले फिलिप्पीमा देखाएको सामुदायिक र प्रेमप्रतिको दृष्टिकोण तनावपूर्ण भएको देख्छन्। आन्तरिक असहमतिले समुदायको प्रेम, एकता र समुदायलाई खतरामा पार्दछ।
फिलिप्पी २:१:2,14 "गनगन वा हिचकिचाई बिना सबै गर्नुहोस्।"
फिलिप। ,,२--4,2 Ev म इभोडियालाई सल्लाह दिन्छु र सिन्तकेलाई प्रभुमा एक मनको हुन सल्लाह दिन्छु।
And र म, मेरा वफादार सँगी नोकर, पनि क्लेमेन्स र मेरा अन्य कर्मचारीहरू, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा छन्, सँगै यसका लागि मसँग लड्नेहरूको हेरचाह गर्न म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु। »
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, विश्वासीहरू संघर्ष गरिरहेका थिए जब कोही स्वार्थी र अहंकारी बनेका थिए।
फिलिप। २: १--2,1 Christ यदि ख्रीष्टमा सल्लाह छ, त्यहाँ प्रेमको प्रोत्साहन छ, आत्माको संगति छ, न्यानोपन छ र दया छ, २ त्यसैले एक मनको भएर मेरो आनन्द पूरा गर, समान प्रेम एक, सर्वसम्मति र एक को ध्यान दिईएको छ। Self स्वार्थ र व्यर्थको महत्वाकांक्षाबाट केही पनि नगर्नुहोस्, तर नम्रतामा एक-अर्कालाई आफूभन्दा ठूलो सम्झनुहोस्4प्रत्येकले आफ्नै होइन तर एकअर्काको नजरमा हेर्छ।
हामी यहाँ तलका समस्याहरू देख्छौं:
१. त्यहाँ झगडा छ।
२. त्यहाँ शक्ति संघर्षहरू छन्।
You. तपाई महत्वाकांक्षी हुनुहुन्छ।
They. उनीहरू आफ्नै तरिकामा जिद्दी गरेर कल्पना गरिन्छ।
This. यसले अत्यधिक उच्च आत्म-मूल्यांकन देखाउँदछ।
तिनीहरू मुख्यतया उनीहरूको आफ्नै चासोका साथ चिन्तित छन्।
यी सबै सेटि intoहरूमा पर्न सजिलो छ। मैले ती र म धेरै बर्षहरूमा देखेको छु। अन्धो रहन पनि यत्ति सजिलो छ कि यी मनोवृत्तिहरू एक जना इसाईको लागि गलत छन्। पद -5-११ मूलतः येशूको उदाहरणलाई हेर्नुहोस कि हावालाई सबै घमण्डी र स्वार्थबाट बाहिर निकाल्न दिनुहोस् जसले हामीलाई सजिलै आक्रमण गर्न सक्दछ।
पावल भन्छन्: के तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं अरूहरूभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ र तपाईं समुदायबाट सम्मान र सम्मान पाउन योग्य हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट कत्ति ठूलो र शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो विचार गर्नुहोस्। पावल भन्छन्: तपाईं अरूको अधीनमा बस्न चाहानुहुन्न, तपाई मान्यता बिना सेवा गर्न चाहनुहुन्न, अरु रिसाएको छ किनकि अरुले तपाईलाई दिइएको मान्दछन्? सोच्नुहोस् कि ख्रीष्ट बिना के गर्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो।
"विलियम हेन्ड्रिकको धेरै राम्रो पुस्तक एक्जिट साक्षात्कारमा, उनले रिपोर्ट गरे
चर्च छोड्नेहरूको बारेमा उसले गरेको अध्ययनको बारेमा। चर्चको अगाडि ढोकामा उभिएका धेरै मानिसहरू आफू आउनुको कारण सोधिरहेका छन्। यस तरिकाले तिनीहरू आफूले पुग्न चाहेको व्यक्तिको 'कथित आवश्यकता' पूरा गर्ने प्रयास गर्न चाहन्थे। तर केही, यदि कुनै छन् भने, पछाडिको ढोकामा तिनीहरू किन छोड्दैछन् भनेर सोध्नुहोस्। त्यो हेन्ड्रिक्सले गरे, र उनको अध्ययनको नतिजा पढ्न लायक छ।
जब म छोडेकाहरूको टिप्पणी पढ्दा म छक्क परें (साथै केही विचारशील मानिसहरूले छोडेका केही अन्तर्दृष्टि र पीडादायी टिप्पणीहरू सहित) केही चीजहरू जुन चर्चले अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरू सबै किसिमका चीजहरू चाहन्थे जुन चर्चको लागि आवश्यक छैन। कसरी सराहना गर्ने, 'पेट्ट' हुने र अरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न कुनै बाध्यता बिना नै उनीहरूको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्ने आशा गर्न। " (सादा सत्य, जनवरी २०००, पृ। २.2000)
पावलले इसाईहरूलाई ख्रीष्ट भनेर सम्बोधन गरे। उहाँ तिनीहरूलाई ख्रीष्टको समुदायमा जस्तै आफ्नो जीवन बिताउन आग्रह गर्नुहुन्छ। यदि तिनीहरू यस प्रकारले बाँचे भने, परमेश्वरले उनीहरूलाई महिमा दिनुहुनेछ जस्तो ख्रीष्टले गर्नुभयो।
"किनकि यो आत्मा तिमीमा छ, जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो, who जो परमेश्वर स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एक शिकार [जस्तो] परमेश्वरको जस्तो हुनु भएन; But तर उनले आफूलाई बोले, एक नोकरको रूप लिए र मानिस बराबर भयो, र एक मानिस जस्तै आफ्नो उपस्थिति मा,6उसले आफूलाई नम्र बनायो र मृत्युको आज्ञाकारी भयो, क्रूसमा मृत्युसमेत। Is त्यसकारण, परमेश्वरले उहाँलाई सबै मानिसहरूलाई माथि उचाल्नुभयो र उसलाई एउटा नाम दिनुभयो जुन सबै नामहरू भन्दा माथि छ, १० ताकि येशूका नाममा स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएका सबै घुँडाका घुँडा टेक्नेछन्, ११ र सबै भाषाहरू प्रभु पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुहोस्।
पावलले स्वर्गको नागरिकको हैसियतमा आफ्नो व्यक्तिगत दायित्व दाबी गर्छन् (राज्य) पूरा गर्नु भनेको येशू जस्तै आफ्नो अभिव्यक्त गर्नु र नोकरको भूमिका निर्वाह गर्नु हो। एक व्यक्तिले अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि मात्र आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन, तर दु: ख पनि भोग्नु पर्छ (1,5.7.29-30)। फिलिप। १.२ "" जहाँसम्म ख्रीष्टको कुरा छ, उहाँमा विश्वास गर्न मात्र होइन तर उहाँकै कारणले पनि कष्ट भोग्नु पर्ने अनुग्रह तपाईलाई दिइएको छ। "
तपाईं अरूको सेवाको लागि तयार हुनुपर्दछ (२.१2,17) "खसालिनु" - संसारको मूल्य भन्दा फरक दृष्टिकोण र जीवनशैली राख्न (3,18-19)। फिलिप। २.१2,17 "तर यदि मलाई तपाईंको विश्वासको बलिदान र पुजारीको सेवकाईको लागि छुट्टिनुपर्‍यो भने, म तपाईंहरू सबैसँग खुशी र खुशी छु।"
फिलिप। 3,18,१ ;-१-19 many धेरै जना हिंड्नलाई, जस्तो कि मैले तिमीलाई बारम्बार भनेको छु, तर अब रुन पनि भन्छु, किनकि ख्रीष्टको क्रूसका शत्रुहरू; १ their तिनीहरूको अन्त विनाश भएको छ, तिनीहरूका ईश्वर तिनीहरूका पेट नै हुनुहुन्छ, तिनीहरू आफ्नो लाजको गर्व गर्छन् र तिनीहरूका इन्द्रियहरू पार्थिवतिर डोर्याइएका छन्।
तपाईंले यो बुझ्नको लागि साँचो नम्रता देखाउनुपर्दछ कि "ख्रीष्टमा" हुनु भनेको नोकर हुनु हो किनकि ख्रीष्ट यस संसारमा प्रभुको रूपमा होइन तर सेवकको रूपमा आउनुभएको थियो। ,
अरूको खर्चमा आफ्नै स्वार्थमा स्वार्थी हुने खतरा हुन्छ, साथै अहंकार विकास गर्नु जुन आफ्नो स्थिति, प्रतिभा, वा सफलताको नतिजामा गर्व गर्न उक्साउँछ।
पारस्परिक सम्बन्धमा समस्याहरूको समाधान अरूको लागि नम्र संलग्नताहरू राख्नुमा निहित छ। आत्मत्यागी मनोभाव भनेको ख्रीष्टमा वर्णन गरिएको अन्य प्रेमप्रतिको प्रेमको अभिव्यक्ति हो, जुन "मृत्युको लागि आज्ञाकारी थियो, हो मृत्युमा"।
साँचो सेवकहरूले आफ्नो भावना व्यक्त गर्दछन्। पावल यसलाई व्याख्या गर्न ख्रीष्टलाई प्रयोग गर्दछन्। ऊसँग नोकरको बाटो छनौट गर्ने पूर्ण अधिकार थियो, तर उसले आफ्नो कानुनी स्थिति दाबी गर्न सक्दछ।
पावल हामीलाई भन्छन् कि सुहाउँदो धर्मको लागि त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन जसले यसको नोकरको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक अभ्यास गर्दैन। त्यहाँ धार्मिकताका लागि कुनै ठाउँ पनि छैन जुन बाहिर आउँदैन वा अरूको चासोको लागि पूर्ण रूपमा खसाल्दैन।
हामी आत्मनिर्भर समाजमा बाँचिरहेका छौं, "म पहिलो" दर्शनको साथ डूबिएको छ र दक्षता र सफलताको कर्पोरेट आदर्शहरूको आकारमा। तर यी चर्चका मूल्यमान्यताहरू होइनन् जुन ख्रीष्ट र पावलले परिभाषित गरेका थिए। ख्रीष्टको शरीर फेरि इसाई नम्रता, एकता र समुदाय मा लक्ष्य गर्नु पर्छ। हामीले अरूको सेवा गर्नु पर्दछ र यसलाई हाम्रो प्राथमिक उत्तरदायित्वको रूपमा देख्नु पर्दछ कार्य मार्फत पूर्ण प्रेम गर्न। ख्रीष्टको मनोवृत्ति, नम्रता जस्ता, अधिकार वा आफ्नै आफ्नै हितको रक्षाको माग गर्दैन, तर सधैं सेवा गर्न तयार छ।